Gọvanọ David Umahi Nke Ebọnyị Abụọla Ndị Otu Nzuzo Ọnụ – Ụwandịigbo
Igbo sịrị oke amana ụma taa akpa dibịa, ma dibịa amana ụma bụọ oke ọnụ. Mana Gọvanọ David Umahi na-achị Steeti Ebọnyị abụọla ndị otu nzuko dị iche iche na steeti ya ọnụ. Gọvanọ Umahị gwara ndị ụlọ na-emebe iwu na steeti ahụ na onye otu nzuzo ọbụla ewepughị aka enwe nʻofe tupu abalị asaa ga-ahụ ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme.
Gọvano Umahi kwuru nke a mgbe ọ na-ebinye aka nʻakwụkwọ maka iwu ọhụrụ na steeti ahụ. Ọ gwara ndị na-ege ntị na ya agaghị enye onye ọbụla a na-enyo enyo dịka onye otu nzuzo ọrụ. O kwukwara na aka ndị uweojii kpara onye nzuzo ọbụla, na a ga-atụ onye ahụ nga mkpụrụ ọka.
Mgbe o ji iwe na-ekwu okwu nʻihi mkpamkpa ndị otu nzuzo na-akpa, Gọvanọ Umahi sịrị na ndị otu nzuzo akwafuole ọbara ụmụmmadụ karịrị akarị. Mana o cheteere ndị oso chi egbu a na ọbara siri ike. O wee si na onye ọbụla kwafuru ọbara ga-anata ụgwọ ọrụ ya nʻihi na onye riri amụ ebule ji ibi ụgwọ. O kwuru sị, “ị bụrụ onye otu nzuzo Aye, ndị otu unu gbuo mmadụ na Legọọsị, gịnwa nọ nʻEbọnyị nwere aka na ya”.
⟵Maazị Nwankwọ Kanu Amalitere Ebe Ọzụzụ Ndị Egwu Bọọlụ
Ọdụ Ụgbọelu Dị nʻEnugwu Nwere Ike Imechi⟶